PowerCivil ee Latin America, aragtida koowaad - Geofumadas
Mee, 2010 AutoCAD-AutoDesk, Engineering, Microstation-Bentley, topografia
Waxaan horeyba u soo dejiyey qalabkan, kaas oo aan kuu sheegay shalay, waxaan ka hadlayaa V8i 8.11.06.27 version.
Bilawga, guddi ayaa la kicin doonaa halkaas oo dhammaan shaqooyinka ay ku urursan yihiin. Qeybta hoose waa tabs:
In kastoo ay kuwani yihiin muddo dheer, waxaad ciriiri kartaa guddiga bidix, iyo badhanka midig ee aagga aad bedeli karto tab.
Midkastaa wuxuu leeyahay macne guud oo ku jira guddiga bidix, sida midka aan ku muujinayo sawirka iyo gudida saxda ah ayaa leh muuqaalka sheyga la soo xulay.
Sidaa daraadeed, tusaaluhu wuxuu tusayaa in aan ku suganahay dusha sare, oo leh xulashada dusha sare ee loo yaqaan 'Original', iyo dhinaca midigta waxay muujinayaan waxyaabo ay ka mid yihiin xaddiga dhibcaha, seddex xagasha, jajabyada kala duwan, iwm.
Tusmada sare, amarrada farsamooyinka waxaa lagu muujiyay tusaalaha tusaale ahaan muujiyey Drain, halka fursadaha muuqaalka, abuurista macluumaadka, editing, xisaabinta, iwm.
Gudigu ma aha wax cusub, oo la mid ah InRoads, laakiin waa faa iidada uruurinta joogtada ah ee injineernimada. Tanina waa mid aad u wanaagsan si aan loogu marin habaabinin isticmaaleyaasha barnaamijyadii hore ee khadkan Bentley.
Guud ahaan, marka la barbardhigo kala qaybsanaanta Geopak, iyo dhadhanka of InRoads, waxaan u arkaa mid aad u wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad isku daydo haddii wax walbaa jiro.
Sidii aan ku idhi qoraalkii hore: PowerCivil: Waa 'InRoads' oo leh dhufto, dheecaan biyo, dusha sare, MicroStation iyo Isbaanish.
Waxaan isku dayay inaan ku milmo macquulka AutoDesk Civil 3D, waxayna yihiin waxyaabo aad u kala duwan oo ku saabsan miiska.
Taasna, indhahaaga Kalkaaliye y Settings kala-saarista mawduucyada.
Inta kale waa isku mid, oo labada barnaamijba waxay u muuqdaan kuwo isku dhow. Waxaan u maleynayaa inay tahay faa iido weyn in gudiga madaniga ah ee 3D la sudho dhamaadka, halka midka PowerCivil uu dul sabeynayo, in kastoo labadaba cabir ahaan lagu hagaajin karo. Qeybta bidix ee PowerCivil waa lakala saari karaa, iyadoo laga tagayo shaqeynta ku haboon ee la dhigo labada daaqadood meelaha ay ka yaryihiin wadada.
Horey u ciyaarnay waxaan arki doonaa sida loo sameeyo PowerCivil layliyo ee Curricada heerarka iyo isku xirnaanta aan horey u soo dhisnay dhawr maalmood ka hor.
Xallinta dhibaatooyinka maktabadaha
Markii hore waxaan lahaa qalad qalaad:
Dhibaato ku dhejinta maktabadda LOCALE Resources, gpkSiteString.drx
Tani waa si fudud loo xaliyo - waxaan dhahaa fududahay, maxaa yeelay waa sida ugu fudud skype saaxiibka - ku daray maktabadda InRoads ee waddada:
C: Faylasha barnaamijka BentleyPowerCivilInRoadsGroupbin halkaas oo ugu yaraan 1033 iyo 3082 faylasha waa inay jiraan, midkasta oo aan haysan, dhammaan faylasha ayaa la abuuray lana nuqul geliyey faylkan.
Iyadoo tan la xalinayo, kiiskeyga waxa uu ahaa faylka magaciisu yahay 1034, waan u badali lahaa, lakiin waxaan jeclaan lahaa inaan halkaas tago.
Kuwani waa drx ah oo loo qoondeeyay in lagu ordo qalab la isku habeeyey si loogu dhigo runtime. Marka laga hadlayo PowerCivil, tani waa kiiska, maxaa yeelay waxay u socotaa sida haddii ay ahayd caado InRoads, oo lagu sameeyay Microstation VBA.
Gebogebadii, waxay ila tahay aniga ahaan u habeyn wanaagsan iyo uruurinta howlaha InRoads iyo Geopak. Laakiin haddii ay ku shaqeyso habka macquulka ah ee horumarinta mashruuca, waan arki doonaa.
Post Previous" Hore Halka Bentley uu la socdo aagga Rayidka
Post Next Tools Beta Available 2.0 PlexEarthNext »
6 Jawaabta "PowerCivil ee Latin America, aragtida ugu horeysa"
Waxaan fahansanahay in noocyadan shati-siinta ah horey loogu habeeyay macnaha guud. Taasi waa, haddii aad ka iibsato mid ka mid ah Civil for USA, ma keenayo Civil for Latin Latin.
JOURGE REYES isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan haystaa qaybta Ingiriisiga, sidee baan u habeyn karaa oo u habeyn karaa Latin America ama Colombia?
xayawaan isagu wuxuu leeyahay:
Maalmo maalmo ah ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka ka helo qof iga caawin kara boostada. Xaqiijinta 4ever1@gmail.com mahadsanid….
Waa inaad la xiriirtaa Bentley ee kuugu dhow ee Spanish, Mexico, Colombia ama Spain.
Jose Ponce isagu wuxuu leeyahay:
Anigu waxaan ahay user 3D, waxaanan rabaa inaan tijaabiyo Powercivil, waxaad iigu sheegi kartaa sida aan u soo dejisan karo. Waxaad iga caawin kartaa inaan helo iyo wax kasta oo ay qaadato si aad u soo qaadato.
Horey baan u mahadcelinayaa.
douglas menjivar isagu wuxuu leeyahay: